Homopiperazine ntụ ntụ (505-66-8) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Homopiperazine ntụ ntụ
Rating: SKU: 505-66-8. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na ikike mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Homopiperazine ntụ (505-66-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Homopiperazine ntụ ntụ eji iji 1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane site na-emeghachi omume na 2-bromo-thiazole. Ọ na-eme dị ka ebe nchekwa maka repaglinide na fasudil hydrochloride. A na-ejikwa ya na nkwadebe nke onye na-anabata H3 onye na-anabata ihe, nke a na-eji maka ọgwụgwọ nke ọnọdụ neurodegenerative. Ọzọkwa, a na-eji ya na ihe dị mma, ihe ịchọ mma, emulsifier na ihe siri ike. Ọ na-eme dịka onye na-emechi ígwè maka ígwè. Na ọgwụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka antipyretic na mbenata ọbara ọbara, adiposity, nwayọọ, antipsychotic na mgbochi ụjọ.
Homopiperazine ntụ ntụ video
Homopiperazine ntụ ntụ isi agwa
aha: Homopiperazine ntụ ntụ
Usoro Molecular: C5H12N2
Molekụla arọ: 102.177
Melt Point: 38-40 Celsius C (gbaa.)
Nchekwa Nche: Refrigerator, N'okpuru Iyi Igwe
agba: White na-acha odo odo odo Crystalline ntụ ntụ
Homopiperazine ntụ ntụ dị ka ọgwụgwọ maka neurodegenerative ọnọdụ
Homopiperazine ntụ ntụ Usage
Mkpụrụ ọgwụ a ga-adị iche maka ndị ọrịa dị iche iche. Soro iwu dọkịta gị ma ọ bụ ntụziaka dị na akara ahụ. Ihe omuma ndi a gụnyere nani onunu ogwu a. Ọ bụrụ na ọgwụ gị dị iche, agbanwela ya belụsọ ma dọkịta gị agwa gị ka ịmee.
Ọnụ ọgụgụ nke ọgwụ ị na-ewere na-adabere n'ike nke ọgwụ ahụ. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ nke doses ị na-ewe kwa ụbọchị, oge a na-etinye n'etiti doses, na ogologo oge ị na-eji ọgwụ ahụ dabere na nsogbu ahụike nke ị na-eji ọgwụ ahụ eme ihe.
(1) Maka granulu maka usoro nhazi usoro ngwọta:
• Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma-2 grams ugboro atọ n'ụbọchị maka otu ụbọchị. A ghaghị imezi ọgwụgwọ na izu abụọ.
• Ụmụaka-Ụdị dabeere na afọ na / ma ọ bụ ibu ahụ. A ghaghị imezi ọgwụgwọ na izu abụọ.
• Ruo afọ 2: Doctor ga-ekpebisi ike.
• 2 ruo 8 afọ: 2 grams otu ugboro n'ụbọchị maka otu ụbọchị.
• 8 ruo 14 afọ: 2 grams ugboro abụọ n'ụbọchị maka otu ụbọchị.
(2) Maka nkwụsịtụ ụlọnga nke ụlọnga:
• Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma-1.8 grams kwa awa anọ maka ngụkọta izu atọ n'otu ụbọchị. A ghaghị imezi ọgwụgwọ na izu abụọ.
• Ụmụaka-Ụdị dabeere na afọ. A ghaghị imezi ọgwụgwọ na izu abụọ.
• Ruo afọ 2: 600 milligrams (mg) kwa awa anọ maka ngụkọta izu atọ n'otu ụbọchị.
• 2 ruo 8 afọ: 1.2 grams kwa awa isii maka ngụkọta izu abụọ n'otu ụbọchị.
• 8 ruo 14 afọ: 1.2 grams kwa awa anọ maka ngụkọta izu atọ n'otu ụbọchị.
(3) Maka mpempe akwụkwọ mbadamba ụrọ:
Maka nkịtị roundworms:
• Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma-3.5 grams (piperazine hexahydrate) kwa ụbọchị maka ụbọchị abụọ n'usoro. A ghaghị imezi ọgwụgwọ ọzọ n'otu izu.
• Ụmụaka-Ụdị na-adabere na ịdị arọ ahụ ma dọkịta ga-ekpebisi ike. Otú ọ dị, ọgwụ a na-emebu bụ 75 mg (piperazine hexahydrate) kwa kilogram (34 mg kwa paụnd) nke arọ ahụ kwa ụbọchị maka ụbọchị abụọ n'usoro. A ghaghị imezi ọgwụgwọ ọzọ n'otu izu.
• Ndị okenye na ụmụ-Nzube dabeere na arọ ahụ ma dọkịta ga-ekpebisi ike. Otú ọ dị, ihe a na-emebu bụ 65 mg (piperazine hexahydrate) kwa kilogram (29.5 mg kwa paụnd) nke arọ ahụ kwa ụbọchị maka ụbọchị asaa n'usoro. A ghaghị imezi ọgwụgwọ ọzọ n'otu izu.
Ịdọ aka ná ntị na Homopiperazine ntụ ntụ
Emela nkịta nwa nkita ma ọ bụ nwa pusi n'okpuru izu isii. Enweghi irighiri nwa nkịta na-arịa ọrịa, nkịta, cat, ma ọ bụ nwa pusi. Gwa onye na-agwọ ọrịa anụmanụ na nchoputa, ọgwụgwọ na njikwa nke nje ahụ. Ekwadoghị maka nkịta n'okpuru 5lbs. ma ọ bụ nwamba n'okpuru 2lbs. nke arọ ahụ. Ekwesighi ya aro maka nwanyi ime ma ọ bụ na-elekọta nwa. Anu ulo nke 1 afo kwesiri inwe uzo ogwu na-adighi nma.
A na-eji Homopiperazine ntụ ntụ dozie 1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane site na-emeghachi omume na 2-bromo-thiazole. Ọ na-eme dị ka ebe nchekwa maka repaglinide na fasudil hydrochloride. A na-ejikwa ya na nkwadebe nke onye na-anabata H3 onye na-anabata ihe, bụ nke a na-eji maka ọgwụgwọ nke ọnọdụ neurodegenerative. Ọzọkwa, a na-eji ya na ihe dị mma, ihe ịchọ mma, emulsifier na ihe siri ike. Ọ na-eme dịka onye na-emechi ígwè maka ígwè. Na ọgwụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka antipyretic na mbenata ọbara ọbara, adiposity, nwayọọ, antipsychotic na mgbochi ụjọ.
A na-eji mkpochapuzine ntụ ntụ mee ihe dị ka ihe ndị na-emepụta ọgwụ na ọgwụ na ọgwụ, dịka ọmụmaatụ, na-etinye aka na njikọ nke fasudil hydrochloride.
Homopiperazine ntụ ntụ na - arụ ọrụ dị ka onye na - emechi emebi ígwè maka ígwè. Ejikwala ya na nkwadebe nke ndị na-akwado ihe nrịta H3 nwere ike iji mee ihe dị ka ọgwụgwọ maka ọnọdụ nkwụdegenerative dịka ọrịa Alzheimer.
Homopiperazine ụkọ ntụpọ
Homopiperazine ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Homopiperazine ntụ ntụ si AASraw
Bortezomib ntụ ntụ (179324-69-7)